Chris Jericho inopa runyorwa rwemazita ake epasi rose anokunda anosanganisira WWE, AEW, NJPW, uye WCW - Wwe
Chris Jericho inopa runyorwa rwemazita ake epasi rose anokunda anosanganisira WWE, AEW, NJPW, uye WCW
Chris Jericho anga ari mubhizimusi rekurwira bhizinesi kweanoda kusvika makore makumi matatu. Akakunda mazita epasirese pasirese uye mukusimudzira kwakasiyana siyana. Chinzvimbo chake muAEW chinoratidza charisma yake, tarenda, uye kuzvipira kubhizinesi.
Pa Instagram, Chris Jericho akaronga boka remusoro wake wepasirose kukunda kubva kwakasimudzira kwakasiyana.
Chris Jericho akahwina makwikwi muWWE, AEW, WCW, NJPW uye nezvimwe
Kutenda kune @prowrestlingstatistics yekunyora iyi yakasarudzika rondedzero yeese angu eWorld Title kukunda ... ese makuru uye madiki! Pamwe chete neaya ndinoziva kuti ndaivewo @NWA middleweight shasha mu @cmll_mx, #WAR junior heavyweight champion & #WAR tag team champions (na #Gedo) muJapan. Ndine chokwadi chekuti kune mamwe mashoma, asi chero nzira yanga iri gehena ye rizzun ... kusvika zvino! #LeChampion @allelitewrestling @wwe @ njpw1972
Chinyorwa chakagovaniswa na Chris Jericho (@chrisjerichofozzy) pana Jul 14, 2020 pa1: 55 pm PDT
Chris Jericho akatenda @prowrestlingstatistics yekunyora runyorwa rweakakunda mazita makuru. Zvinosanganisira:
1 X AEW Mhare
1 X IWGP Intercontinental Mutambi
1 X ECW World Terevhizheni Mhare
1 X CRMW Heavyweight Mhare
2 X CRMW Mid-Heavyweight Mhare
1 X CRMW Tag Chikwata Chikwata
1 X WWE Mhare
5 X Wepasi Pese Anorema Kurema
2 X United States Mutambi
9 X Intercontinental Mhare
1 X Hardcore Mhare
1 X RAW Tag Chikwata Chikwata
3 X Yenyika Tag Chikwata Chikwata
1 X WWA Tag Chikwata Chikwata
1 X WCW World Terevhizheni Mhare
5 X World Cruiserweight Mhare
Chris Jericho achaenda pasi munhoroondo seimwe yeakanakisa pro wrestlers echizvarwa chake. Basa rake razvino muAEW muenzaniso wakanaka weizvozvo, uye netariro, achave nezvakawanda zvekupa mumakore anotevera.
zvinhu zvekuitira vakomana rokuberekwa
kunzwa kusakwana kune mumwe munhu
maitiro ekuita mushure mekunge warara naye
zvekuita kana mhuri ikutengesa
chimwe chinhu chekuita kana iwe uchinetseka
iripi aj lee manje